Somali News 06.28.21 | KWIT
Barnaamijka Imtixaanka Nebraska wuxuu dhammaan doonaa 31-ka Luulyo iyadoo maalinta ugu dambeysa ee imtixaanka bilaashka ah loo qorsheeyay bisha Luulyo 18deeda.
Ricketts ayaa sheegay in aysan jirin waddo lagu joojiyo fayraska isla markaana dadaallada yareynta la sameeyay si loo yareeyo tirada isbitaallada la dhigo.
Waqtiga uu ku egyahay xayiraada federaalka ee saarista barakicinta dhamaadka bisha Luulyo ayaa sare u qaadeysa walaaca laga qabo in kumanaan kun oo dadka degan Nebraska ah oo ka dambeeya kirada guryahooda laga saari karo.
Nebraska waxay u qoondeysay $ 200 milyan oo ka mid ah xirmada gargaarka coronavirus ee Congress-ka la ansixiyay bishii Diseembar si looga caawiyo dadka inay bixiyaan kirada iyo biilasha biilasha. Garyaqaan ka socda Gargaarka Sharciga ee Nebraska ayaa sheegaya in tirada la rari doono la filayo inay boodo ka dib marka la joojiyo joojinta, laakiin ma cadda inta ay le’eg tahay.
Caawimaadda kirada ayaa laga yaabaa inay hakiso xoogaa guri ka saarid ah haddii qoysasku ay dhaqso u heli karaan gargaarka.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay diiwaangelisay 67 isbitaallo la dhigey gobolka oo dhan oo ay la socdaan daraasiin bukaan ah oo ku jira hawo-qaadaha.
Waxaa jiray 43 kiis oo cusub Iowa. Waxaa jiray toddobo kiis oo cusub degmada Woodbury hal usbuuc gudahood. Heerka waxtarka ee 14-maalmood ee maxalliga ah waa 1%, kalabar heerka gobolka ee 2%.